Nooca cuntada ka dib dhalashada cunuggu waa inuu ku jiraa hooyo
Caafimaadka dumarka Nafaqada haboon
Caanaha naaska waa cuntada ugu fiican ee ilmaha dhashay. Inta lagu jiro naas nuujinta, haweeney ayaa mas'uul ka ah caafimaadkeeda iyo caafimaadka ilmaheeda. Hooyo waa in lagu dhaadhiciyaa in ay siinayso ilmaheeda oo dhan sida ugu fiican ugana qaadato habab ku habboon ilaalinta nuujinta. Kaliya kiiskan, naas-nuujintu waxay ku guulaysan kartaa. Sida uurka, hooyada kalkaaliyaha xanaaneeyaha waa inay ahaataa mid buuxa oo isku dheelitiran. Haddii cuntada aysan helin wax faa'iido leh, ka dibna waxay keeni kartaa la'aanta carbohydrateska, borotiinka, dufanka iyo, siday u kala horreeyaan, yaraanta vitamin ee hooyada iyo ilmaha. Waa maxay nooca cuntada ee hooyadu leedahay ka dib dhalashada ilmaha?
Si aad u cuntid waa inay noqotaa dhowr jeer maalintii, laakin doorbid ka hor quudinta cunug kasta. Nidaamkan nafaqada ayaa u habboon hooyada nafteeda, sababtoo ah waa waxtar badan oo ku habboon in la cuno jawi deggan marka cunuga uu hurdo.
Waa lagama maarmaan in lagu daro nafaqada miro hooyada iyo khudradda hooyada , tk. waxay yihiin ilo fiitamiin ah oo fitamiino iyo macdan ah, waa la cuni karaa inta cunnid kasta. Sidoo kale, cuntooyinka ay ku jiraan fitamiin B sida rootiga, baradhada, badarka ayaa loo baahan yahay. Khudradda cagaaran waa inay ahaataa qiyaastii ¼ of hooyada kalkaaliyaha hooyada. Hase yeeshee, khudaarta cagaaran iyo miraha qasacadaysan, waxay u fiican tahay hooyada inay diido, sababtoo ah cunuga qasacadeysan waa khatar.
Miraha cuntada waa in si tartiib tartiib ah loo bilaabo. Isku day inaad isku daydo inaad midba midka kale si gooni ah u tijaabiso dhawr cisho gudaheeda kadibna fiiro u yeelashada dareenka ilmaha. Uma baahnid inaad u diyaariso salad miro leh hal mar dhowr mirood oo cusub. Digniintan waxaa lagama maarmaan ah si markaa haddii ilmuhu qabo xasaasiyad, waxaad si sahlan u ogaan kartaa nooca miro ee uu keenay. Haddii ilmuhu aanu lahayn xasaasiyad xasaasiyadeed, ma jiraan wax isbeddel ah oo ku yimaada saxarada, markaa si ammaan ah ayaad u tijaabin kartaa. Haddii ilmuhu uu weli qabo dareen-celin, markaa alaabtaasi waa la mamnuucayaa 1.5 ilaa 2 bilood. Kadib waxaad isku dayi kartaa mar kale. Talooyinka isku midka ah waa in loo hoggaansamaa khudaarta iyo waxyaabaha kale.
Si taxadar leh u eeg sida loo diyaariyo saxanka, cuntada waa in aan la daaweynin daaweynta kulaylka dheer, ma aha mid dufan leh, maaha basbaas iyo aan lahayn cuntooyin sigaar cabbin.
Maalmaha ugu horeeya iyo bilaha dhalmada ka dib, nafaqada hooyada kalkaaliyaha ah waa in ay u roonaato raashin si fudud loo dheefay. Hilibka, kalluunka iyo ukunta waa ilaha borotiinka sare. Dooro hilibka waa inaan aheyn mid dufan leh oo doorbidaya karkariyo, oo aan shiil lahayn. Kalluunku sidoo kale waxay u baahan yihiin inay doortaan dufan - hunqo, xayawaan, pockets, cod. Kalluunka, marka lagu daro borotiinka, waxaa sidoo kale jira fitamiin D. Aad u badan oo ah borotiinnada iyo kalsiyumka ayaa laga helaa caanaha qallalan, sida caanaha la gooyey, kefir, labeenta, jiis. Kaalshiyamku waa lagama maarmaanka u ah waxqabadka saxda ah ee habka wadnaha iyo habka dheef-shiidka, iyo sidoo kale habka lafaha. Sababtoo ah la'aanta kalsiyum, cudur khatar ah sida rickets ayaa dhici karta. Haddii raashinka hooyada kalkaaliyaha ah ay ka mid tahay waxyaabaha caanaha laga sameeyo, ilmaha ayaa u badana inuu ku dhaco caloosha.
Maqaarka hooyada kalkaaliyaha ah, miro, masago, kalluunka qajaaran ee hodanka ku ah fiyuusta cuntada waa in lagu daraa.
Nafaqada hooyada kalkaaliyaha ayaa si toos ah u saameynaysa gobolka ilmaha, sidaas darteed waxaa haboon in aad ka fekerto inaad horay u soo qaadatid menu-kaaga iyo inaad ka tagtid waxyaabaha khatarta u ah ilmaha. Laga soo bilaabo cuntooyinka hooyada waa in laga reebo cuntooyinka cusbada, sigaarcabka iyo dufanka. Marinades iyo cunto qasacadaysan, dhir udgooni maaha mid la jecelyahay. Ha cunin inta badan basasha iyo toonta, tk. waxay ku dhacaan dhadhanka caanaha. Canag, sonkorta, macmacaanka iyo macmacaanka ayaa sababi kara hannaanka hargabka ee xiidmaha. Hooyooyinka kalkaaliyaasha xanaaneeya waa inay hormariyaan cuntadooda, iyagoo tixgelinaya dhammaan alaabooyinka aan ku habooneyn ilmaha cusub, si aanay u waxyeeleynin ilmaha.
Miisaanka dareeraha ee hooyada kalkaaliyaha xanaaneeyaha waa inay noqotaa qiyaastii 2 litir. Xilliga nuujinta, cabitaanka ugu weyn ee haweenku waa inuu cabbaa biyo. Waxaa faa'iido leh in lagu daro fiyuusta cuntada ee dill, anise, macdanta. Waxaad cabi kartaa cabitaanka caanaha cagaaran, laakiin waa inaad joojisaa isticmaalida canabka, casiirka yaanyada, casiirka liinta. Ha cabin cabitaano qudaaraysan - geedi socodka hargabku wuu dhici karaa, iyo liinyada waxaa ku jira tiro badan oo ah waxyaalaha ilaaliya iyo midabada. Cabitaanka khamriga ah gabi ahaanba waa laga saaray. Qadar badan, khamrigu wuxuu u keeni karaa sunta ilmaha, iyo qiyaas yar oo ka hortag ah koritaanka maskaxda iyo jirka. Shaaha, qaxwada (iyadoon lahayn caffeine), kookaha, qajaarka ayaa la cabi karaa, laakiin maaha mid xoogan.
Waa maxay nooca cuntada ee hooyadu leedahay ka dib dhalashada ilmaha? Nafaqada hooyada kalkaaliyaha caafimaad iyo caafimaadka ilmaha ayaa aad ugu dhow, sidaas darteed waa inaad arrintaan si aad ah ula xiriirtaa oo aad sameysatid liiska saxda ah. Intaa waxaa dheer, hooyadu waxay u baahan tahay nasasho fiican waxayna ku socotaa hawada cusub, sida shaqooyinka jimicsiga fudud iyo waxbarashada jirdhiska ayaa faa'iido leh. Laakiin haddii si lama filaan ah aad uhesho wax dhibaato ah ama aad u baahan tahay la-talin shakhsiyeed, markaa waxa fiican inaad la tashato takhasusle.
Cuntooyinka ku jira magnesium
Ilaha dabiiciga ah ee fitamiin B
Gaajada: waxyeelo ama waxtar?
Ayurveda - Dawo dhaqameed oo caadi ah
Nadaafad habboon oo loogu talagalay dhalinyarada
Cabitaan la kariyay oo leh cabitaan khudrad
Sidee ayaad ugu isticmaali jirtey qaraha marka hore?
Xayawaanka guriga - xayawaanka cajiibka ah
Ka nadiifi jirka jirka sunta iyo miisaanka luminayo
Raspberry ku baraarugay shukulaatada
Ka qaadashada dufanka xad-dhaafka leh ee CrossFit
Shukulaatada cagaaran oo leh shukulaatada cad iyo yicib
Dhaqaaleynta miisaaniyadda qoyska iyo lacagta
Zucchini cufan leh yaanyo iyo digirta cagaaran
Anna Kalashnikova ayaa ku naxday isbeddello xun oo muuqaal ah
Casserole laga bilaabo tufaax iyo taariikhaha
U shaqeeya dhallinyarada xagaaga - xaggee shaqo laga helaa?
Kaluunka hilibka lo'da ee labeen dhanaan
Sida loo xanaaneeyo maqaarkaaga ka dib 40 sano
Kala duwanaanta raashinka xilliga qaboobaha: Salad ahaan xilli
Dhibaatada sigaar cabista dumarka